Kuenda Green - Hape International (Ningbo) Co., Ltd.
Iyo compostable chivakwa chehuni zvinhu ndeye akavimbika mudiwa mune zvakasikwa zvekushandura zviwanikwa, uye huni kubva kune yakasikwa iri yakapfava, isingasimudzi uye ine hutano kune yemunhu muviri. Nekudaro, kutenderera kwehuni hwakareba uye kukosha kwayo kwehupfumi kwakati kwirei.
Saka isu takagadzira mashandisirwo emishenjere zvinhu. Bamboo chirimwa chinokura nekukurumidza chinoshandiswa seimwe nzira yezvinhu zvemazuva ano mbishi nehuni.
Bamboo madzinde anoramba akapfava kwemakore mashoma ekutanga, achiomesa mukati memakore mashoma uye oita lignification. Pakupedzisira ivo vanogadziriswazve mushure mekukohwa. Ivo vanove vanoremerwa nekufamba kwenguva, vachipa yakanaka chinyorwa chekuvakisa matoyi. Bamboo inogadziriswa mbishi zvinhu. Inokura munzvimbo zhinji dzemamiriro ekunze.
Muodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweChina, kune zvakawanda zviwanikwa bamboo muBeilun, Ningbo. HAPE ine sango hombe remushenjere mumusha wakajairwa weBeilun muBeilun, izvo zvinova nechokwadi chekuti pane zvigadzirwa zvakakwana zvekutsvagisa, kusimudzira uye kugadzirwa kwematoyi emishenjere.
Bamboo inogona kukura kusvika pamamita makumi matatu pakureba, iine hukuru hwepakati dhayamita ye 30 cm uye rusvingo rwekunze rwekunze. Seimwe yezvirimwa zvinokurumidza kukura, inogona kukura mita imwe zuva rega rega pasi pemamiriro akanakisa! Iwo anokura mhedzisiro anofanirwa kuve akasimbiswa kweanenge 2-4 makore vasati vakohwewa nekugadziriswa.
Bamboo ndeimwe yehupenyu hwemamiriyoni evanhu kutenderera pasirese. Bamboo nhungirwa zvinodyiwa, zvine hutano uye zvine hutano. Huni dzinowanikwa kubva kuna Bamboo Culms dzakasimba kwazvo. Kwezviuru zvemakore, alomst zvese muAsia zvakagadzirwa nemishenjere, nekuti iri kwese kwese uye inogona kushandiswa kune akawanda akasiyana madonzo. Akawanda mabasa anoenderana nekugadziriswa uye tsika yeiyi chaiyo indasitiri. Tsinde dzemashenjere dzinowanzotanhwa musango remusango remushenjere pasina kukuvara kwemuti.